Blog - N'ogbe mgbasa ozi n'ihi mmanụ dị mkpa | AromaEasy
Ihe na Nwere ike 29, 2021 June 16, 2021 by Aromaeasy
frankincense mkpa mmanụ uru Mmanụ ndị dị mkpa ejirila ọtụtụ puku afọ mee ihe maka ọgwụgwọ ha na ọgwụgwọ ha dịka akụkụ nke omume aromatherapy. Ha na-enwetara site na epupụta, ị ga ma ọ bụ mgbọrọgwụ nke osisi mara maka ahụ ike ha. Ya mere, olee frankincense mmanụ dị mkpa? Frankincense, mgbe ụfọdụ, kwuru na dị ka olibanum, is […]
Ihe na blog Hapụ ikwu
esi eme ka aka na-edozi aka Ee, ọ dịghị ihe na-akụ aka aka ruo ugbu a na igbochi ọrịa na-efe efe dị ka COVID-19. G WHATN IF Ọ B IFR IF na mmiri na ncha adịghị n’ụdị ọnọdụ a kapịrị ọnụ? Ọzọkwa, dịka ị maralarị, karama nke aka aka na-ere ngwa ngwa n'oge nsogbu ahụike ọha na eze. Ma echegbula-iji aka gị na-edozi aka gị dị mfe. Niile […]
Ihe na blog 4 Comments
Nke a bụ ntuziaka dị nkenke nke AromaEasy na mmanụ dị mkpa maka ọnya ọnya nwere ike bụrụ ihe na-akpasu iwe ma na-egbu mgbu n'ihi na ha na-eme ije na ọrụ kwa ụbọchị siri ike. Iberibe bụ ezigbo nsogbu, ọkachasị ndị joggers ndị na-achọ ịzọ ogologo oge ọ bụla, ebe ọ bụ na etuto blisters na-egbochi ha ịrụ ọrụ site na ime ka ahụ ghara iru ala. Ebe ahụ […]
Ihe na September 24, 2020 July 6, 2021 by Matt
Mmanụ dị mkpa maka azụ mgbu A na-amụ na-egosi na ihe dịka pasent 80 nke ndị America na-enwe ahụ mgbu n'oge ụfọdụ n'oge ndụ ha. Dabere n’otú o si sie ike, ihe mgbu na ihe mgbu ya na-eso ya nwere ike ịbụ nke a na-agaghị ekwe mmekwata na ọ ga-esiri gị ike ịrụ ọrụ, oge ezumike, na ọbụna mmegharị kwa ụbọchị. Nnukwu mgbu (mgbu) azụ mgbu nwere ike chọọ […]
Ihe na September 16, 2020 September 16, 2020 by Matt
Mmanụ ndị dị mkpa dị n’osisi na-ekere òkè mgbe niile n’ememme ime mmụọ, na-enyere ndị mmadụ aka izere ihe ndị na-adịchaghị mkpa. Ihe ndị dị ọcha na mmanụ dị mkpa na-eme ka usoro olf nke ọma na-eme ka ụbụrụ limbic ụbụrụ nwee njikọ na ncheta, mmetụta, na mmetụ. Mmanụ dị mkpa nwere ike inye aka mee ka elekwasị anya na mmụọ mgbe ejiri ya mee mmụọ, dị mkpa […]
Ihe na September 4, 2020 September 4, 2020 by Matt
Nke a bụ ntụziaka dị mkpirikpi AromaEasy na mmanụ dị mkpa iji gbuo nje n'oge ndị a siri ike, anyị niile chọrọ iwepụ ụlọ anyị nke nje na nje. Ọtụtụ na-ejikarị ngwaahịa nhicha dị iche iche eme ihe. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị na-ekpocha kemịkal nwere ike imebi ihe karịa ihe ọma. A ọzọ eke […]
Nke a bụ ntuziaka kachasị nke AromaEasy maka otu esi eji mmanụ dị mkpa na ịsa ahụ. Ibute ole na ole nke mmanụ dị mkpa na mmiri ịsa ahụ n’abalị bụ nnukwu ụzọ ị ga-esi zuru ike wee zuru ike mgbe ogologo ụbọchị gasịrị. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ mmadụ amatala, ma ọ dịkarịa ala akụkụ ụfọdụ, mmekọrịta dị n'etiti ahụike dị ebube […]
Ihe na August 4, 2020 July 6, 2021 by Aromaeasy
Nke a bụ ihe nduzi na ịhọrọ mmanụ dị mkpa maka ọgwụgwọ sitere n'okike nke njigide mmiri Enwere ọtụtụ ihe nwere ike ibute okwu njigide mmiri. Ahụ mmadụ bụ nke mejupụtara ọkachasị mmiri, ka emechara. Puffiness na ọzịza, bloating na izugbe erughị ala na-akọwa njigide mmiri. Anyị nwere ike idozi okwu a nke ọma, […]
Ihe na blog 2 Comments
Nke a bụ ntuziaka dị nkenke AromaEasy banyere mmanụ dị mkpa maka ịgwọ melasma. Melasma, okwu na-acha uhie uhie nke anụ ahụ, na-ebute ntụpọ n'olu, n'ubu, na ihu. Na melasma bụ naanị otu n'ime ọnọdụ anụ ahụ na-adị kwa ụbọchị. Mana enweghị nchekasị, enwere ọtụtụ nhọrọ maka ọgwụgwọ na ọnọdụ anụ ahụ. Mkpa mmanụ […]
Ihe na blog 1 Comment
Ihe na July 14, 2020 July 14, 2020 by Matt
AromaEasy na-enye mmanụ ndị kachasị mkpa iji nyere gị aka ịkwụsị ị smokingụ sịga, yana nduzi kachasị mma iji kwụsị ị smokingụ sịga. Ọ bụrụ na ị gbalịrị ịkwụsị ị smokingụ sịga, mara na ịkwụsị nwere ike ịbụ oge siri ike jupụtara na agụụ, isi ọwụwa, na ike ọgwụgwụ. Nke a bụ ihe mere na eziokwu na ọ bụ naanị 7% nke ndị mmadụ jikwaa ịkwụsị […]